Waxyaabaha ugu xiisaha badan waxaa ka mid ah Niagara Falls, Grand Canyon, Sahara, Mount Everest, The Dead Sea, Ha Long Bay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Safarka Dalxiiska » Waxyaabaha ugu xiisaha badan waxaa ka mid ah Niagara Falls, Grand Canyon, Sahara, Mount Everest, The Dead Sea, Ha Long Bay
Safarka Dalxiiska • Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • News • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Sirta Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
8 min akhris
Sumcadda sawirka: lzf / Shutterstock
Wadamada qaar waxay bilaabaan inay ka qaadaan xayiraadaha socdaalayaasha la tallaalay, Instagram Hashtags ee mucjisooyinka dabiiciga ah ee caanka ah waxay muujinayaan rabitaanka dalxiisayaasha inay safraan. Shirkad ku taal dalka Ingiriiska oo la macaamilaysa keydinta tamarta ayaa soo saartay warbixin.
Mareykanka, Reer Yurub, Shiine, Safrayaal Jabaaniyiin ah ayaa tirinaya maalmaha si ay mar kale adduunka ugu sahamiyaan xaqiiqadii hore ee COVID-19.
Hash Tags ee barta 'Instagram' waa tilmaan wanaagsan oo ay safrayaashu rabaan inay mar kale aadaan, iyo Niagara Falls oo ku teedsan Yosemite Park iyo Grand Canyon ayaa liiska ku jira
Nasiib darro Ahraamta Weyn ee Giza waxay ka heleen tirada ugu yar ee Hashtags barta Instagram intii lagu jiray xiisadda socota, laakiin marka la qiimeeyo caannimada haramka tani way is beddeli doontaa, marka adduunka dib loo furo.
In yar oo loo baahan yahay safarka dalxiiska ee COVID waa meelaha loo safro sida Mount Kilimanjaro, iyo Victoria Falls. Tani waa horyaal isku mid ah oo diyaar u ah inay fuulaan jaranjarada Instagram sida Komodo Island, Angel Falls ee Venezuela ama Great Barrier Reef ee Australia.
Tirada badan ee tallaalka Mareykanka, oo ay weheliso dib u furista dalka safarada gudaha, ayaa dalxiisayaasha Mareykanka dib ugu soo celiyey wadada wayna muujineysaa.
Sidoo kale Iceland waxay ufuran tahay booqdayaasha Nalalka Waqooyiga waxay noqdeen kuwa ugu cadcad kuwa barta Instagram soo dhiga.
Mount Everest ee Nepal ayaa wali ah meel sixir ah oo loogu talagalay Instagram. Bandhig Faneed soo socda oo ka dhacaya meesha ugu sarraysa adduunka ayaa sawirkan ku dari doona Guinness World Record.
Waxyaabaha Ugu Badan 'Grammed iyanu' hadda waa:
Cajiibka Dabiiciga ah ee ugu caansan Country
#4 Aurora Borealis / Nalalka Waqooyiga Iceland 3,362,055
#5 Sahara Waqooyiga Afrika 2,661,348
#6 Galapagos Islands Ecuador 2,012,669
#7 Mount Everest Shiinaha / Nepal 1,793,316
#8 Delta Danube Romania 1,499,237
#9 Badda Dhimatay Jordan / Israel 1,288,628
Yaabka dabiiciga ah ee xiisaha ugu badan ku leh barta Instagram waa Niagara Falls, oo ku yaal looxyada Kanada iyo USA, oo leh wax ka badan 5.7 milyan hashtags on Instagram.
Beerta Qaranka Yosemite, Mareykanka
Sumcadda sawirka: Andrew Opila / Shutterstock
Waxaa loo caleemo saaray inuu yahay kan ugu caansan ee la yaabka leh ee loo yaqaan 'Instagrammable natural nature', Yosemite National Park ayaa ku soo ururisay kaliya xishoodka 5,000,000 Instagram hashtags barnaamijka caanka ah ee warbaahinta bulshada.
Waxaa loo arkaa inay matalaan awood, adkaysi iyo xasillooni, Yosemite National Park ee Ameerika waxay hoy u tahay boqolaal mitir murabac oo yaabab dabiici ah, laga soo bilaabo biyo-dhacayaasha barakaysan illaa daaqa iyo dooxooyinka cajiibka ah. Kuwii soo booqday yaabka dabiiciga ah waxay quudintooda ka buuxiyaan sawirro iska indha-tiraya baraf-weynaha iyo dhererka cabsida leh ee welwelka leh. Iyada oo kaqeybgalka mararka qaarkood iyo sawirka arooska la tuuro, Yosemite wuxuu umuuqdaa inuu yahay meesha ugufiican ee soojeedinta lama ilaawaanka ah iyo wacad qaadista.
Iyada oo loo dhigayo tan labaad ee ugu caansan adduunka ee la yaabka leh ee loo yaqaan 'Instagrammable natural', Niagara Falls waxay ku uruurisay istags aad u qurux badan 4,607,444 barta Instagram.
Iyada oo leh xarumo badan oo dalxiis oo ku yaal agagaarka aagga, kumanaan kun ayaa u soo qulqulaya aagga caanka ah ee Kanada maalin kasta si ay u arkaan biyo-qulqulka qulqulaya ee qulqulaya halkaas oo ay ku dhejinayaan meel ay ku yaalaan biyo-dhaca labaad ee ugu dheer meeraha.
Sumcadda sawirka: Jim Mallouk / Shutterstock
Waxaa loo sameeyay "aragtida ugu weyn ee qof walba oo Mareykan ah ay tahay inuu arko" oo uu qoray Teddy Roosevelt, layaab malahan in Grand Canyon ay dhigto kaalinta saddexaad ee layaabka dabiiciga ah ee ugu caansan Instagrammable.
Marka la joogo 277 mayl dheer, cajaa'ibka juquraafi ee caanka ah waxaa booqda qiyaastii 6 milyan oo dalxiisayaal ah sanadkiiba, sidaa darteed layaab ma leh in muuqaalka diiran ee ombre lagu qoro in ka badan 4,000,000 jeer Instagram illaa iyo hadda. Si qurux badan ayaa loo xardhay dabeecadda, Grand Canyon waxay caan ku tahay inay noqoto mid ka mid ah kuwa ugu caansan weli daanka-daadinta mucjisooyinka dabiiciga ah ee adduunka.
Saxaraha Saxaraha, Afrika
Saxaraha ugu horeeya ee liiska, Sahara wuxuu helayaa cinwaanka afaraad ee ugu yaabka badan ee layaabka leh ee adduunka, oo leh in kabadan 2,200,000 Instagram hashtags guud ahaan.
Sahara oo cabiraya 8,600,000 kiiloomitir oo laba jibbaaran, Saxaaraha wuxuu isku xiraa 11 dal oo Afrikaan ah wuxuuna ka kooban yahay saddex meelood meel qaaradda oo dhan! Goobaha jilicsan ayaa hoy u ah in ka badan 70 nuujiyaal kala duwan, laakiin layaabka dabiiciga ah ayaa weli caan ku ah aamusnaantiisa xasilloonida iyo xasilloonida naxdinta leh.
Sumcadda sawirka: aaltair / Shutterstock
Danube Delta ee Romania ayaa soo koobtay shanta ugu sarreysa ee layaabka leh ee dabiiciga ah ee loo yaqaan 'Instagrammable nature', iyagoo ka soo qaadaya 1,638,573 ishtags culus Instagram.
Tan labaad ee nooceeda ah ee ugu weyn Yurub, Danube River Delta waa qaab-dhismeed ka kooban dhoobad la xareeyay oo wabiga u qaaday badaha ku xeeran. Webiga buluuga ah ee firfircoon wuxuu soo jiitaa dalxiisayaal fara badan, qaar badan oo ka mid ahna waxay ku diiwaangeliyaan booqashadooda sawir qasab ah oo ah Instagram iyaga oo ku raaxeysanaya safar dooni nasasho leh ama qabsashada duurjoogta ku hareeraysan.
Jasiiradaha Galapagos, Ecuador
Ka gaabinta shanta ugu sarreysa, Jasiiradaha Galapagos ayaa ah meesha lixaad ee ugu caansan Instagrammable dabiiciga ah, oo leh 1,612,457 hashtags oo ka yimaada booqdayaasha.
Ku saleysan Ecuador, Jasiiradaha Galapagos waxay hoy u yihiin dhaqdhaqaaqyo fulkaanno badan waxaana caan ku ah in lagu xuso aragtida isbeddellada Darwin. Intaas waxaa sii dheer, Jasiiradaha Galapagos waxay ku yaalliin meel aad ugu dhow dhulbaraha, taas oo macnaheedu yahay in martidu ku raaxeysan karaan cimilo diiran sannadka oo dhan!
In kasta oo jasiiraduhu u dhaqmaan sida muuqaal qurux badan, sawirro badan oo Instagram ah oo la yaab leh oo dabiici ah ayaa soo bandhigaya xayawaannada badda ee halkaas laga heli karo, taas oo ka dhigaysa abuuritaankan dabiiciga ah goob ku habboon kuwa jecel duurjoogta!
Ha Long Bay, Fiyatnaam
Sumcada sawirka: sanyanwuji / Shutterstock
Waxaa loo caleemo saaray sida cajiibka dabiiciga ah ee toddobaad ee ugu caansan Instagram, Ha Long Bay ee Fiyetnaam waxaa lagu soo rogay waqti xaddidan 1,243,473 jeer.
Ha Long Bay oo dalxiisayaasha u fidisa godad qurux badan, biyo sumurud iyo jasiirado laga soo jeexjeexay nuuradda, ayaa ah meel aad loo jecel yahay oo caan ku ah fuulashada, quusitaanka iyo socodka. Iyada oo tiro badan oo duurjoogta badda ah iyo munaarado dhagax nuuradda ka mid ah, qaabeynta dabiiciga ah ee Ha Long Bay waxay u abuureysaa aag-muuqaal muuqaal ah oo muuqaal ah oo loogu talagalay dadka soo booqanaya ee doonaya inay xoojiyaan quudintooda.
Si ka wanaagsan oo loo yaqaan Nalalka Waqooyiga, Aurora Borealis ee Iceland waxay heshaa cinwaanka sideedaad ee ugu cajaa'ibka badan ee loo yaqaan 'Instagrammable nature', oo helaya 1,167,915 hashtags waqtigan.
Waxaa loogu magac daray ilaahadda reer Rooma ee waaberiga, cirka Aurora Borealis waxaa lagu sharraxay bandhig iftiin heer sare ah oo mugdi leh, habeeno cakiran. In kasta oo aan la saadaalin karin, dalxiisayaasha nasiibka u helay inay markhaati ka noqdaan muraayadaha indhaha waxay la kulmayaan mid ka mid ah mucjisooyinka dabiiciga ah ee ugu quruxda badan meeraha, iyada oo durdurro qulqulaya iftiin firfircoon ka dhex cirka cirka.
Sababtoo ah xaqiiqda ah in nalalka waqooyiga la qaban karo oo keliya marka xaaladaha qaarkood ay iswaafajiyaan, layaab ma leh in Aurora Borealis ay uruuriso hashtags ka yar kuwa kale ee yaabka leh ee dabiiciga ah!
Mount Everest, Shiinaha / Nepal
Sumcadda sawirka: Anton Rogozin / Shutterstock
Iyadoo 1,125,527 Instagram hashtags guud ahaan, Mount Everest waxaa loogu magac daray kan sagaalaad ee ugu cajaa’ibka dabiiciga badan adduunka ee Instagrammable.
Sida buurta ugu dheer dhulka, oo taagan joog aad u qurux badan oo dhererkeedu yahay 29,000, Mount Everest waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee loo dalxiis tago dhulka. U hamuun qabashada dhererka qurxoon, booqdayaashu waxay si joogto ah ugu qaadaan barta Instagram si ay ula wadaagaan aragtiyada xiisaha leh.
Si aad u adag ayaa loo dhigayaa 10-ka ugu sareeya ee leh 900,429hashtags, Pamukkale oo ku taal Turkiga ayaa ah tan tobnaad ee ugu caansan adduunka ee la yaab leh, oo soo jiidanaysa liiska.
Iyada oo leh go'yaal nuurad cad oo baraf ah, dhul aad u qurux badan, iyo badaha caanaha leh, barkadaha kuleylka ah ee Pamukkale waxay soo jiitaan soo booqdayaasha daafaha adduunka waana guul weyn oo u soo hoyatay dadka barta Instagram-ka ee doonaya inay hagaajiyaan quudkooda.
Dhanka kale, astaamo caan ah sida Jasiiradda Komodo, Great Barrier Reef iyo Cliffs of Moher dhammaantood waxay gaabiyeen tobanka boos ee ugu sarreeya, iyagoo helay 83,569, 817,956 iyo 635,073 hashtags, siday u kala horreeyaan.
Maalinta kaneecada adduunka waxaa sidoo kale u dabaaldega dalxiiska adduunka ...
Diyaaradda Southwest Airlines ayaa sheegtay in Hawlgalkii Duullimaadka Jamaica ee ...
Hawaii waxay bilawday barnaamijka ka-reebitaanka tallaalka ...
Dalxiiska Wiyisha ayaa lagu soo bandhigay Tansaaniya Mkomazi Park
South African Airways waxay ku soo noqonaysaa cirka 23 -ka Sebtember
Jawiga safarka ee qarsoon ee Hindiya: Quaint Jaisalmer
Air Astana waxay heshay diyaaraddeeda lixaad ee cusub ee Airbus A321LR
Buug iyo Socdaal kalsooni ku leh Goobaha Sandals
Booqdaha Hawaii oo ku baxaya US $ 1.44 Billion Laakiin Hoos ...
Duulimaadkii Zambia ama Zimbabwe ayaa si dhakhso leh u noqday ...
Etihad Airways oo loo kordhiyay Verified dukumiintiga safarka ...